Sekuphele iminyaka elindele indlu | News24
Sekuphele iminyaka elindele indlu
Izithombe:Makhosandile zuluUNksz Thulisile Goge phambi kwendlu yakubo engekho esimeni esilungele ukuthi engahlala kuyona uthi sekuphele iminyaka elindele indlu kahulumeni.
UNKSZ Thulisile Goge wakaZayeka eSweetwaters uthi sekuphele iminyaka ecishe ibemibili afaka isicelo sokwakhelwa indlu exhaswe nguhulumeni kodwa namanje ayikakhiwa.
Uthe into emukhalisa kakhulu ukuthi ngenxa yesimo sendlu yakubo useze waphoqeleka ukuthi afihle ikhanda kwamakhelwane.
“Kulonyaka ngiye emadwaleni ngiyobuza ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi ngakhelwe indlu njengoba sekuphele iminyaka ngilindile. Ngatshelwa ukuthi kusazomele ngiqhubeke ngilinde ngoba ukukaqalwa ukwakhiwa kwezindlu endaweni engikuyona,” kusho uNksz Goge.
Uqhube wathi enye into emukhathazayo ukuthi njengoba ingakakhiwa indlu exhaswe nguhulumeni uhlezi ethola izicelo kubantu abafuna ukuthenga indawo yakubo okungagcina kuphethe ngokuthi kwayona indawo le imulahlekele.
Indlu yakubo uNksz Goge yakhiwe ngodaka kanti uthe into eyamuphoqa ukuthi ayofihla ikhanda kwamakhelwane ukuthi akuphephile ukuhlala kuyona njengoba ingenawo amawindi kanti futhi umnyango awukhiyeki.
“Uthayela okufulelwe ngawo uyavuza yingakho ngingakwazi ukuhlala endlini yasekhaya futhi yingakho ngiwudinga nje umxhaso kahulumeni,” kusho uNksz Goge.
Uthe ngonyaka ofile wazama ukuthola usizo kumholi womphakathi wangaleyo nkathi kodwa nalokho akusizanga njengoba namanje engakayitholi indlu.
“Angisebenzi ngithembele kumusa womakhelwane engihlala kubona, imali engiyitholayo eyesibonelelo sengane kuphela,” kusho uNksz Goge.
Uqhube wathi eminye imindeni yasendaweni seyakheliwe izindlu ezixhaswe nguhulumeni kodwa ezinye azikaqedwa ukwakhiwa ngoba kwezinye kushoda uphahla.
Omunye womakhelwane kaNksz Goge, uNkk Paulina Mfeka uthe ezinyangeni ezedlule wayithola inombolo yendlu kodwa ukwakhiwa kwayo akukaqali.
“Ngenkathi bezonginikeza inombolo yendlu bangitshela ukuthi kuzomele ngibekezele ngoba izinto zihamba kancane,” kusho uNkk Mfeka.
Okhulumela umasipala waseMsunduzi, uNksz Thobeka Mafumbatha uthe uhlelo lokwakhiwa kwezindlu endaweni yakaZayeka, eSweetwaters, luyaqhubeka kanti akukho ukubambezeleka okukhona.
55% - 1993 votes